Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Expedia dia mahita fitomboana mahavariana ho an'i Jamaika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Fihaonana ao Jamaika sy Expedia
Ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Expedia Inc., maso ivoho lehibe indrindra manerantany momba ny fizahan-tany eto an-tany ary mpamokatra raharaham-barotra lehibe indrindra ho an'i Jamaika, dia nanome toky ny minisitry ny fizahan-tany, Hon. Edmund Bartlett, sy ireo tompon'andraikitra ambony hafa izay "ny angon-drakitra ataon'izy ireo dia mampiseho mazava tsara ny alina sy ny fitomboan'ny mpandeha miaraka amin'ny metrika roa mihoatra ny ora iray amin'ny taona 2019." Nanamarika ihany koa izy ireo fa i Etazonia dia mijanona ho tsena fitadiavana fikarohana ambony indrindra ho an'i Jamaika.
Ny fampisehoana an-tsokosoko momba ny tsiambaratelo dia natao tao amin'ny biraon'ny orinasan'ny Expedia Inc. any Miami, Florida, omaly alatsinainy 27 septambra 2021.
Na dia misy aza ny ahiahy mifandraika amin'ny COVID-19, ny fahatokisan'ny mpandray anjara fizahan-tany manan-danja any Etazonia amin'ny fitomboana ao Jamaika dia mbola matanjaka hatrany.
Manohy manamafy ny fiarovana ny fiarovana ny lalàm-panoherana i Jamaika.
Tonga ny vaovao fandraisana na eo aza ny fihenan'ny fangatahana dia an-tany noho ny fielezan'ny Delta variant an'ny COVID-19 sy ireo olana mifandraika amin'izany. Nisy vokany ratsy ilay fihenan-tsasatra Sehatra fizahantany ao Jamaikana izany aza, mitombo ny fahatokisan-tena fa hihatsara hatrany ny toe-draharaha atsy ho atsy.
Nanamarika i Bartlett: “Hatreto dia nifandray tsara ny fifandraisanay amin'ireo mpandray anjara lehibe amin'ny fizahan-tany any Etazonia. Misy ny ahiahy mifandraika amin'ny COVID-19, na izany aza, ny fahatokisana ny fitomboana ho Mbola matanjaka be i Jamaika. Tsy hanohy hamela na inona na inona ho sendra isika ary hanamafy ny fiarovana ny Resilient Corridors, ny fanatsarana sy ny fomba mihoatra ny salanisan'ny vaksiny COVID-19 manerana ny sehatry ny fizahantany ary ny tena marina fa i Jamaika no toerana tsara indrindra fialan-tsasatra any Karaiba. ”
Ny fampisehoana an-tsokosoko momba ny tsiambaratelo dia natao tao amin'ny biraon'ny orinasan'ny Expedia Inc. any Miami, Florida ny alatsinainy 27 septambra 2021. Nanatevin-daharana an'i Bartlett ny filohan'ny Birao Mpizahatany ao Jamaika, John Lynch; Talen'ny fizahan-tany, Donovan White; Strategiste zokiolona ao amin'ny Ministeran'ny fizahantany, Delano Seiveright ary talen'ny talen'ny fizahan-tany ho an'i Amerika, Donnie Dawson. Ny fifandraisan'ny Expedia dia iray amin'ireo andiana fihaonana amin'ireo mpitarika indostrian'ny fizahan-tany marobe, ao anatin'izany ny Airlines lehibe, ny Cruise Lines ary ny Investors, manerana ny tsenan'ny loharanom-baovao lehibe indrindra any Jamaika, Etazonia sy Kanada. Izany dia atao mba hampitomboana ny fahatongavan'ireo tonga any amin'ny toerana haleha mandritra ny herinandro sy volana ho avy, ary koa, mba hampiroboroboana ny famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny sehatry ny fizahan-tany eo an-toerana.
Ny orinasa Inc. Inc. koa no orinasam-pitaterana fahatelo lehibe indrindra any Etazonia, ary orinasam-pitaterana fahefatra eran-tany. Ireo tranokalan'izy ireo, izay mpampangorona ny saran-dalan'ny fitsangatsanganana ary milina fikarohana metasy, dia misy ny Expedia.com, Vrbo (HomeAway teo aloha), Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, trivago ary CarRentals.com.